Spark chivhariso-TAKUMI AUTO CHIKAMU
Spark plug inogara kwenguva yakareba sei?
Kunyangwe kana spark plug yashandiswa nemazvo, kutsiva nguva nenguva kunodiwa sezvo chiri chinhu chinoshandiswa.
Pamusoro pekururamisa kupisa chiyero, ndeapi mamwe matanho anofanirwa kutorwa durin
A Ita shuwa kuti spark plug ine tambo chaiyo inosvika. Injini haishande nemazvo isina tambo yakasvika. Kana ipulagi ine tambo isiriyo yakashandiswa zvisirizvo, pisitoni kana vharuvhu inogona kuirova nekukuvadza injini. Zvakare, kune zvekare kunetsekana kuti iyo electrode inogona kupisa nekunyungudika
Pane here yakatarwa inosimbisa torque yeparaki plug
Q15 Pane here yakatarwa inosunga torque yeparaki plug A Iyo inosunga torque yeparaki plug inoshanduka nehupamhi hwepark plug. Izvi zvinotevera zvinokurudzirwa torque tsika.
Iko kusvibiswa pakati peiyo insulator nesimbi goko kunokonzerwa negesi leakage?
A Haisi chivara chinokonzerwa nekudonha kwegesi asi nekorona kubuda (corona stain).
Chii chakanaka kusagadzikana?
"Kufambisa mashandiro" zvinoreva kugona kweinjini kubudirira uye zvinobudirira, kupisa yakawanda yakasanganiswa nemhepo / mafuta akasanganiswa. Yakanaka spark plug inogona kusimudzira "Kufambisa kuita"
Ndezvipi zvinokonzeresa kupisa plug?
Kudziya kwenguva refu kunogona kukonzera kupisa kwakasarudzika senge pre-kuvesa uye kudonhedza zvichikonzera kunyungudika kwefaraki plug electrode uye kukuvara kweinjini.
Chii chinonzi spark plug fouling?
A Icho chiitiko icho kabhoni yakaunganidzwa pamagumo ekupfura inokonzeresa kubuda kwemagetsi kunotungamira mukufema.